Ungawususa Kanjani Ukugqwala Emathulusini Indlela Elula Kakhulu - Amathiphu Engadi
Ungawususa Kanjani Ukugqwala Emathulusini Indlela Elula Kakhulu
Isinyathelo 1 - Cwilisa amathuluzi kubha yeviniga
Isinyathelo 2 - Scour Rust Off Of Tools
Isinyathelo 3 - Ithuluzi elomile nelula
Isinyathelo 4 - Jabulela Ithuluzi Lakho Elihlanzekile, Elingasasebenzi, Futhi Eligcotshisiwe!
Kungani Uviniga Ususa Ukugqwala Kahle Kangaka?
Kwenzeka kithina sonke balimi…
Siphuma esivandeni: ukuthena, ukugaya, ukusika, ukuncipha… futhi sikhohlwa ukucosha ithuluzi.
Lokhu kwenzeke kimi muva nje nesithandwa sami AbaFuzi beFelco F-2 , ngokungangabazeki ezinye zezihlahla ezinhle kakhulu ozoke uzithenge. Zizokugcina impilo yakho yonke… UMA uzinakekela.
Imayini yaqala ukugqwala futhi yayingasheleli ngokushelela njengakuqala. Futhi babengasiki kahle kakhulu, ikakhulukazi lapho ngibhekana ne-bougainvillea ekhule ngokweqile.
Ngakho-ke ngangihlanza ukuwahlanza, ngathola indlela elula kakhulu eyabenza baba sesimweni sokuphakama futhi. Ungasebenzisa le ndlela ukwenza i- konke yamathuluzi akho engadi (noma elinye ithuluzi ngokujwayelekile), futhi lizoshiya amathuluzi akho ekhanya futhi.
izitayela ezintsha zombala wezinwele 2021
Uma ukhetha ividiyo, bheka umhlahlandlela wami lapha. Ngaphandle kwalokho, funda umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo.
Uviniga omhlophe o-distilled
Amafutha okugcoba - ngangisebenzisa 3-IN-ONE Amafutha Wezinjongo Eziningi
(Ngokuzithandela) Insipho enomthwalo osindayo - ngisebenzise Insipho ye-LAVA
Okokuqala, ake sibheke ukuthi i-Felco 2's yami yayigugile kanjani ngaphambi kokuyihlanza:
Isikele sokuthena seFelco 2 ngaphambi kokuhlanza nokususa nokugqwala.
Akukubi kakhulu, kepha nakanjani kunesidingo esikhulu sokuhlanzwa! Thola imbiza yakho eyakhiwe ngamasoni noviniga omhlophe osenkingeni, bese ufaka amathuluzi akho embizeni. Uzofuna ukubashiya embizeni okungenani amahora angama-24 ukuvumela isikhathi sokuthi i-asidi yeviniga yenze umsebenzi wayo ebusweni bamathuluzi.
Usebenzisa uviniga omhlophe o-distilled ukukhulula ukugqwala kumathuluzi engadi.
Ngemuva kwamahora angama-24, izigaba ezinamandla kunazo zonke zizobe seziwile kuthuluzi lakho bese kuthi konke okunye kube kukhululekile futhi kube lula ukubhekana nakho esigabeni sesibili.
Ukuhlanza i-Felco 2 ithena nge-scour pad.
Manje njengoba usumanzise amathuluzi akho, sekuyisikhathi sokuwashaya nge-scour pad! Qiniseka ukuthi uthola eyodwa enensimbi kuyo - uzofuna amandla okusesha umsebenzi osindayo ukuze ususe izingcezu ezinenkani kakhulu zokugqwala. Ukuze uthole ithuluzi elifana ne-pruners lami, kubalulekile ukungena kuma-nooks nama-crannies, kufaka phakathi amagiya.
Ungesabi ukuba nesandla esinzima lapha: sizomisa futhi sigcobe ithuluzi ngokulandelayo, ngakho-ke kubalulekile ukuphuma kuwo wonke umgqomo.
Ukuthena okuthambisa ngamafutha ka-3-IN-ONE.
Ngemuva kokuthi wanelisekile ngemizamo yakho yokuhlwaya, bamba amathawula wephepha noma indwangu bese usula kahle ithuluzi lakho. Kubalulekile ukuyithola yomile ngangokunokwenzeka, ngoba sizofaka uwoyela wokuthambisa nokuvikela ukugqwala ngokulandelayo, futhi uwoyela wamanzi + awuxubeki!
indlela yokugqoka ubhodisi ojwayelekile nge-halter top
ngisebenzise 3-IN-ONE Amafutha Wezinjongo Eziningi ukwenza umsebenzi wenziwe - kuyasiza futhi i-telescoping spigot yenza ukusisebenzisa ezindaweni ezinzima ukufinyelela umoya ophelele.
Faka isicelo ngokukhululekile bese usebenzisa elinye ithawula noma indwangu ukuyigcoba engxenyeni yethuluzi.
Kuhlanjiwe, kususwe ukonakala, futhi kwagcotshwa i-Felco 2 pruners!
Lapho sinakho! Ithuluzi elihlanzekile ngokuphelele, eligqokile futhi eligcotshisiwe! Endabeni yeFelco 2's yami, akufanele ngidinge ukuphinda le nqubo ngaphandle kokuthi ngiwashiye ngobuwula futhi, engizozama ngakho konke ukungakwenzi.
Ngemuva kokugeza izandla zami ngamanye I-Lava Soap , Sengiqedile ngenqubo yokuhlanza nokususa ukugqwala ngaphakathi kwemizuzu eyi-15!
Uma ufana nami, mhlawumbe unelukuluku lokuthi le ndlela isebenza kahle kanjani. Kuthiwani ngeviniga elenza ukuthi lisuse ukugqwala ngempumelelo kangaka?
uvithamini e wokoma kwesitho sangasese sowesifazane
Ukuphendula lowo mbuzo, kufanele ngithole isayensi-y kuwe. Okokuqala, kufanele siphendule lo mbuzo:
Ukugqwala yi-hydrated iron oxide, esebenza kuviniga. Uma ufuna konke ngemininingwane ye-nerdy, nakhu okwenzekayo ezingeni lamakhemikhali:
Lokho okushiwo yi-gibberish ngesiNgisi yilokhu okulandelayo:
I-Acetic acid (equkethwe kuviniga) kanye nokugqwala kuphendula ukwakha i-acetate yensimbi (III), encibilikiswa ngamanzi. Ukuphendula nakho kudala amanye amanzi.
Yingakho amanzi ebukeka egqwalile lapho ubheka ithuluzi lakho ngemuva kwamahora angama-24 - kukhona i-acetate yensimbi kulo!
Lokhu kusabela akunjalo empeleni kuhlanzekile insimbi, ivele isuse ukugqwala okukhona. Yingakho kufanele sihlahle wonke amanye ama-rust bese sengeza uwoyela wokuthambisa nokuvikela ukuze siqiniseke ukuthi awekho ukugqwala okusha.
ILava Soap iyatholakala kubathengisi ezweni lonke, kufaka phakathi i-Ace, iWalmart, iDollar General kanye neDollar Yomndeni. Ukuthola isitolo esiseduze nawe, vakashela LavaSoap.com bese uchofoza kunkinobho lapho ungathenga khona.
melania anginendaba nejazi
Imikhiqizo engu-3-IN-ONE iyatholakala kuzwelonke kubathengisi, njenge-ACE Hardware, iLowe’s neTrue Value. Ukuthola izitolo eziseduze nawe ezithwala ukuvakasha okungu-3-IN-ONE 3inone.com bese ukhetha inkinobho 'yokuthi uzothenga kuphi' ekhasini lemininingwane lomkhiqizo ngamunye.
Ngabe unawo noma yimaphi amathuluzi wokuhlanza amathuluzi nokususa ukugqwala? Ngazise emibhalweni engezansi.
umswakama omuhle kakhulu ongaphezu kwama-50
imary kate nama-movie we-ashley amahle kakhulu
imibala yezinwele zasebusika yabesifazane abamnyama
iyiphi indlela engcono yokuqeda ama-blackheads